सी को भ्रमणमा बाबुरामको गुनासो, 'मधेशवादी दललाई उपेक्षा गरियो' | Kendrabindu Nepal Online News
२६ आश्विन २०७६, आईतवार १५:४४
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिनको नेपाल भ्रमणलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । नेपालको भ्रमणका क्रममा भएको राजनीतिक भेटवार्ताप्रति समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डा. भट्टराईले गुनासो व्यक्त गरेका हुन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी सँग मधेशवादी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता नगराएको प्रति आपत्ति जनाउँदै डा. भट्टराईले अबदेखि यस्ता गल्ती नगर्न सबैलाई सचेत गराएका छन् ।
उत्तर छिमेकीले मधेश/तराई मात्र हेर्ने गलत परम्परा बस्न र भावनात्मक दूरी बढ्ने सक्ने भन्दै भट्टराईले भविश्यवमा यस्ता संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
दुई दिने नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा शीर्ष नेताहरू लगायतसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर मधेशवादी दलका नेताहरूसँग भने भेट गरिएको थिएन् । शनिवार नेपालको भ्रमणमा आएर सी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् ।
baburam bhattarai, xi jing ping, चिनियाँ राष्ट्रपति, डा. बाबुराम भट्टराई, सी चिनफिन
Prevचिनियाँ राष्ट्रपतिको विदाईसँगै प्रधानमन्त्रीको यस्तो ट्वीट
यी हुन् नेपाल-चीनबीच भएका २० समझदारीNext
‘बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’ : डा. बाबुराम भट्टराई
सर्वदलीय बैठकमा डा.बाबुराम भट्टराईले के भने ?
‘ओली प्रवृत्तिलाई इतिहासबाट छिटो विदा गरौं’ :डा. बाबुराम भट्टराई
श्री ७ खड्ग शमशेर बन्ने सपना देखेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिए : डा.भट्टराई